Miarahaba ireo mpitsidika amin'ny sandriny malalaka i Syria: fizahan-tany ve i Syria Safe tor?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miarahaba ireo mpitsidika amin'ny sandriny malalaka i Syria: fizahan-tany ve i Syria Safe tor?
Ny Siriana dia nandositra ny fitondrana tsy misy olona iray tapitrisa. Ao anaty krizy ny firenena eropeana manandrana mandray ireo mpitsoa-ponenana Syriana, saingy tamin'ny fampirantiana FITUR tany Madrid tamin'ny volana lasa teo dia iray amin'ireo firenena nampiranty sy notokanana ho an'ireo mpizahatany eropeana dia i Syria.
Amin'ny ITB Berlin ho avy izao ao amin'ny efitrano malalaky ny mpitsidika 2.2 dia afaka miresaka momba ny diany mankany Syria miaraka amin'ny fampirantiana ny Syriana Travel & fizahan-tany, raha Siriana an-jatony kosa no mitoby any amin'ireo toeram-pialofana mifandraika amin'ny ivon-toeran'ny fivoriambe ao Berlin, Messe Berlin.
Hatraiza ny maha azo antoka ny fandehanana any Damaskosy? Ny mpitari-dia syriana sy ny minisiteran'ny fizahantany dia te-hieritreritra ianao fa milamina. Ny olom-pirenena amerikana miverina any Etazonia taorian'ny fitsidihany an'i Syria dia mety hiatrika fanontaniana sarotra sasany rehefa mody any an-trano.
Ny fitomboan'ny mpizahatany sinoa mankany Syria dia nitombo nandritra ny taona lasa, manamarika ny fifohazana amin'ny sehatry ny fizahan-tany ao amin'ny firenena, izay noho ny fandresen'ny tafika syriana sy ny fanampian'i Russi, hoy ny minisitry ny fizahan-tany Syriana Besher Riad Yazji tamin'ny media vaovao Rosiana Sputnik tao anaty tafatafa.
Raha mampitandrina ny olom-pireneny ny governemanta sinoa mba handeha ho any Kanada, ireo mpitsidika sinoa any ivelany kosa dia tsy mahita fampitandremana toy izany rehefa mitsidika an'i Syria.
Natomboka ny fiverenan'ireo mpizahatany sinoa any Syria.
I Jordania dia mitazona fivoriana hanohizana ny sidina eo amin'i Amman sy i Damasy. Ny serivisy taxi sy bus eo anelanelan'i Beirut sy Damaskosy dia mandeha tsara. Ny fifindra-monina amin'ny sisintany Libaney- Syriana dia mahomby ary mamela ny visa amin'ny fahatongavan'ny firenena maro.
Tiako i Damasy izay famantarana lehibe eo afovoan'ny renivohitra Syriana.
Hoy ny mpitsidika “George”: Firenena azo antoka i Syria ankehitriny ary ity ny lahatsariny hanamafisana:
Ity horonan-tsary ity dia TSY natao hanaovana politika, izay tokony ho hita amin'ny alàlan'ny atiny.
Tian'ny bilaogera rosiana i Damasy. Izao no antony (amin'ny teny Rosiana):
Ny ampahefatry ny mpizahatany sinoa na 400 tapitrisa dia mandeha amin'ny taom-baovao sinoa